ဘိုးအင်း 737 ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Lease or Buy Boeing 737 private plane Charter flight service from or to your next destination near me includes empty leg deal at affordable price. ကိုသွားပါ ကို http://wysluxury.com/location to rentaLuxury Aircraft chartering for corporate business or personal.
ဘိုးအင်း 737 Airplane Video instruction review Transcript"
0:47 install these special winglets that we're now including in the basic price
1:17 first of all you're going to save fuel up to2plus percent and fuel on the BBJ
1:22 you're going to be able to fly atahigher altitude initially you'll have a
1:30 aerodynamics is if you look at an airplane like beingabig ship there's a
1:34 big wake and what we do is that's that's called vortex we reduce that vortex at
2:01 ထိုကဲ့သို့သောသင်ဤလေယာဉ်ပျံများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် Cabin သို့ segment ကိုလေယာဉ်
2:09 စုစုပေါင်း privacy ကိုအတွက်သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည်ဤအကြောင်းကိုကြီးစွာသောအရာတစျခုတှငျ
2:23 သေးငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေးကခါးပတ်နဲ့သင့်လျော်သောမိဖုရားရဲ့အရွယ်အစားကို double အိပ်ရာဖြစ်ပါတယ်
2:28 but that's about the only difference between it and the bed you sleep on home
2:32 you'll seeashower that'saproper full-size shower you'll seeadining
2:37 room table such as the one we're sitting at so you can afford to put the
2:49 rounded the other thing that we're very proud of this aircraft and I would tip
3:04 41,000 ၏ခွထောကျ 6,500 ခြေဘဝါးသင်ပေါင်းလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုလေကြောင်းအသက်ရှုနေ 6,500 ခြေဘဝါး
3:10 အမြင့်ကြောင်းပုံမှန်လေယာဉ်ပေါ်တက် 18,000 ခြေတစ်လုပ်မ
3:19 ကဲ့သို့သောလေယာဉ်ခရီးစဉ် 12 နာရီသို့မဟုတ် 13 နာရီတည်ဆဲ BBJ မိသားစုသုံးပါဝင်ပါသည်
3:24 ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား 737 as well as versions of the triple seven the 747 နှင့်
Dallas မြို့ မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, ငါ့ကိုအနီး TX Empty ခြေထောက်နဲ့လေယာဉ်